Carcinoid syndrome ဆိုသည်မှာ Carcinoid tumour ဟုခေါ်သော ကင်ဆာအလုံးအကျိတ် တစ်မျိုးမှနေ၍ သွေးထဲသို ့ဓာတုပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်ပေးခြင်းကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အသားနီရဲလာခြင်း စသည့်အမျိုးစုံသော လက္ခဏာများ ပြလာခြင်းကို ခေါ်သည်။လက္ခဏာများ Carcinoid syndrome တွင် အတွေ ့ရများသော လက္ခဏာများမှာ . မျက်နှာနှင့် ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်း အရေပြားတွင် နီရဲလာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖြစ်များသော အတွင်းတိမ်ရောဂါ
အတွင်းတိမ်ဖြစ်ရသော အကြောင်းရင်းအတွင်းတိမ်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အတိအကျပြောဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် အသက်အရွယ်ကြီးတာကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွင်းတိမ် ( Age related cataract )နဲ့ ရောဂါတစ်ခုခုကို အခြေခံပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွင်းတိမ် ( Secondary Cataract ) ဆိုပြီး အုပ်စုနှစ်ခု ရှိပါတယ်။(၁) အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အတွင်းတိမ်မှာ အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ...
အကျဉ်းရှင်းလင်းချက်အူစွပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အူ၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုက အူ၏အခြားအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအတွင်း စွပ်ဝင်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ အူစွပ်ခြင်းကြောင့် အူပိတ်ခြင်း၊ အူပေါက်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ နှင့် အူပုပ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။အူစွပ်ခြင်းသည် ၃နှစ်အောက် ကလေးများတွင် အဖြစ်များသော အခြေအနေတစ်မျိုးဖြစ် ပြီး အများစုတွင် ဖြစ်ရသော အကြောင်းအရင်းကို ရှာမ...
သည်းခြေကျောက်ရှိသူတို့ လိုက်နာသင့်သော အချက်များ
• တစ်နေ့ ရေ ၁၀ -၁၂ ဖန်ခွက်သောက်ပါ။ • ကိုယ်အလေးချိန်များနေပါက အဆီများတဲ့ အစာကိုရှောင်ကြဉ်တာ၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ပြီး လျှော့ချပါ။ • အမျှင်များတဲ့ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဖြစ်တဲ့ ပန်းသီး၊ မုန်ဥလာ၊ သကြားမုန်လာ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ တရုတ်နံနံ၊ ဂရိတ်ဖရု၊ ရှောက်သီး၊ မုန်ညှင်းရွက်၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ဖရဲသီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ စတာတွေကိုစားပါ။ •...
အတွင်းတိမ် ဆိုသည်မှာ မျက်လုံးတွင် ရှိသော မှန်ဘီလူးတွင် ပုံမှန်ကြည်လင်နေရာမှ အဖြူရောင်တိမ်များ ဖြစ်လာခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။လက္ခဏာများအတွင်းတိမ်၏ လက္ခဏာများ အနေဖြင့် . အမြင်အာရုံ ဝေဝါးလာခြင်း. ညဘက်တွင် သေချာမမြင်နိုင်ခြင်း. စူးရှသော အလင်းများအား မခံနိုင်ခြင်း. အရိပ်များ မြင်နေရခြင်း. ပုံရိပ်နှစ်ထပ်မြင်နေရခြင်း များဖြစ...
Rickets ဟု ခေါ်ဆိုသော အရိုးပျော့ရောဂါသည် အမည်နာမ အခေါ်အဝေါ်အတိုင်း အရိုးများ မာကျစ်မှု မရှိသဖြင့် တောင့်တောင့်တင်းတင်းနှင့် ထွားကျိုင်းလာမည့်အစား ကွေးကောက်၊ ဖုထစ်သည့် အရိုးများကြောင့် အရပ်ပုချင်ပု၊ ခြေထောက် ခွင်ချင်ခွင် စသည်ဖြင့် အမြင်ဆိုးသည့် သဏ္ဍာန်များသာ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အဓိက အရိုးပျော့ရခြင်း အကြောင်းမှာ လိုအပ်သည့် calcium ထုံးဓာတ်ကို အရိုးတွင်း မထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။...
ရိုးရိုးမှဲ ့လား၊ ကင်ဆာဖြစ်မယ့်မှဲ့လား
on: 11 Jun, 2017
အရေပြားတွင်ဖြစ်သော ကင်ဆာများထဲတွင် မှဲ ့ကင်ဆာသည် အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ကင်ဆာဟုဆိုလိုက်တိုင်း မှဲ ့တွင်သာကင်ဆာဖြစ်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။မှဲ ့ကင်ဆာသည် အရေပြားအရောင်ကိုဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်း မယ်လနင် (Melanin) ကိုထုတ်ပေးသည့် ဆဲလ် melanocyte များ ပုံမှန် ပွားများလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။အဆိုပါဆဲလ်များသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ နေရာအနှံ ့အပြားတွင်ရှိပြီး ထိုဆဲလ်ရှိသည့်နေရာတွင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မျက်လုံး၊ ပါးစပ်၊...
(၁) ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ?• ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည် နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရမ်းသော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။• အသက်ရှူရခက်ခဲသော ရောဂါဖြစ်သည်။ • လေပြွန်များကျဉ်းနေသည့်အတွက် ကျဉ်းလွယ်၊ ကျုံ့လွယ်ပြီး ရောဂါကို ထကြွစေသောအရာများနှင့် ထိတွေ့လျှင်၊ အပြုအမှုများ ပြုလုပ်မိလျှင် ရောဂါထကြွ လာနိုင်သည်။• ရောဂါကို အရှင်းပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများကို မ...
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါ (urinary tract infection) သည် ကလေးဘဝတွင် မကြာခဏ တွေ့ကြရသော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းဟု ဆိုရာ၌ ကျောက်ကပ်မှ စ၍ ဆီးစီးဆင်းရာပြွန် (ueter) နှင့် ဆီးလမ်း (bladder) ထိ တစ်နည်း ဆိုရသော် ဆီးဖြစ်ရာ “ကျောက်ကပ်” မှ နောက်ဆုံးစုဝေးရာ “ဆီးအိမ်” အထိကို ခေါ်သည်။ ၎င်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် တစ်နေရာရာတွင်းသို့ “ပိုး” ဝင်ခဲ့သော် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ရေ...
FlatFeet ( ခြေဖဝါးအခုံးပျောက်၍ခြေထောက်ပြားခြင်း )
ခြေဖဝါးများ၏အခုံးများသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ကောင်းစွာမဖွံ့ဖြိုး၍ဖြစ်စေ၊ အရွတ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အခုံးများပျောက် (သို့မဟုတ်) ပြားပြီး မတ်တပ်ရပ်သောအခါ ခြေဖဝါးတစ်ခုလုံး အောက်ခြေကြမ်းပြင်ကို ထိနေခြင်းကို “FlatFeet” ဟုခေါ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခြေထောက်တွင် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမရှိပါ။ လက္ခဏာများ- များသောအားဖြင့် လက္ခဏ မရှိပါ။- သို့သော် တစ်ချို့...